Kubadaha naxaasiga ah ee Shiinaha / Kubadaha Copper Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Kangda
Naxaas kubbaddas / kubbadaha naxaasta ah
Kubad naxaas ah: H62 / H65; Kubadaha Copper:
Dhibcaha aqoonta casaanka ah：
Copper Cas sidoo kale loo yaqaan naxaas cas, waa walax fudud oo naxaas ah. Waxaa loogu magac daray midabkiisa guduud-guduud ka dib markii filim oksaydh ah lagu sameeyo dushiisa. Naxaas cas waa naxaas warshad nadiif ah leh barta dhalaalida ee 1083°C, isbadal maleh, iyo cufnaanta qaraabada 8.9, taas oo shan jeer ka weyn tan magnesium. Cufnaanta isku muggu waxay qiyaastii 15% ka culus tahay birta caadiga ah.
Waa naxaas ay ku jirto xaddi oksijiin ah, sidaa darteed waxaa sidoo kale loo yaqaannaa naxaas ay ku jirto oksijiin.
Maarta gaduudku waa nooc nadiif ah oo naxaas ah, oo guud ahaan lagu qiyaasi karo inuu yahay naxaas saafi ah. Waxay leedahay habdhaqan koronto oo wanaagsan iyo balaastik, laakiin xooggiisa iyo adkeysigiisa ayaa yara liita.
Maarta gaduudku waxay leedahay habsami u socodka kuleylka, ductility iyo u adkeysiga daxalka. Wasakhda raadadka ee naxaaska guduudan waxay saameyn daran ku leedahay korantada iyo kuleylka ku shaqeynta naxaasta. Kuwaas waxaa ka mid ah, titanium, fosfooraska, birta, silikoon, iwm waxay si weyn u yareeyaan tabinta, halka cadmium, zinc, iwm ay saameyn yar leeyihiin. Sulfur, selenium, tellurium, iwm waxay leeyihiin milmo adag oo aad u hooseeya oo naxaas ah, waxayna abuuri karaan iskudhaf jilicsan oo leh naxaas, taas oo saameyn yar ku leh habdhaqanka korantada, laakiin waxay yareyn kartaa baaxadda wax soo saarka.
Maarta gaduudku waxay leedahay caabbinta daxalka wanaagsan ee jawiga, biyaha badda, asiidhyada aan oksidheysnayn qaarkood (hydrochloric acid, dilute sulfuric acid), alkali, xalka milixda iyo noocyo badan oo asiidh ah (acetic acid, citric acid), waxaana loo isticmaalaa warshadaha kiimikada. Intaa waxaa sii dheer, naxaas cas waxay leedahay alxamid wanaagsan waxayna ka baaraandegi kartaa badeecooyin kala duwan oo dhammeystiran iyo dhammeystiran iyada oo loo marayo farsameynta qabow iyo heerkulka.
Hore: Saxanka duulaya / Kubadaha birta shiidi kara
Xiga: Si3N4 kubbadaha dhoobada ah
Kubadda naxaas ee loogu talagalay Qufulka
Kubadaha naxaasta ah ee Qalabka Korantada
Kubadaha naxaasta ah ee Farsamada gacanta
Kubadaha naxaasta loogu talagalay Mashiinnada
Kubadaha naxaasta ah ee lagu beddelo
Kubadaha naxaasta ah ee loo yaqaan 'Valves'